Mandry ivohon’ny vato ny traboina | NewsMada
Mandry ivohon’ny vato ny traboina
Tsy mbola nisy ohatr’ity hatramin’izay. Voasahan’ny fanjakana avokoa ny fiahiana ny traboina rehetra. Toky nomen’ny fanjakana izany tamin’ny alalan’ny filazana fa tsy ekena ary voarara tanteraka ny fanaovan’ny olon-tsotra sy fikambanana fanangonam-bola na zavatra hanampiana ny traboina fa hosahanin’ny fanjakana tanteraka izany.
Mandry ivohon’ny vato ny traboina satria efa ny fanjakana mihitsy no manome toky ka tsy hisy intsony ahiahy ny amin’ny fanarenana ny fahalavoana nateraky ny tondra-drano. Ho voafehin’ny tompon’andraikitra avokoa ny famonjena ara-potoana sy ny fanaterana ny vatsy amin’ireo toerana rehetra niharam-boina.
Samy hahazo ny anjara sahaza azy avokoa ireo mponina analiny tsy manan-kialofana sy very fananana tao anatin’ny fotoana fohy vokatr’ireny andro ratsy nianjady tamin’ny faritra maro ireny.
Fomba hifehezana ny kolikoly sy ny fanararaotana ny fahavoazan’ny mpiray tanindrazana ity fanapahan-kevitra noraisin’ny fanjakana ity. Hatrizay, betsaka ireo olon-tsotra na fikambanana manao tolo-tanana ho an’ireo traboina saingy very an-javony eny an-dalana ny ankamaroan’izy ireny. Tsy tonga hatramin’ny farany any amin’ireo tena traboina sy sahirana tena mila izany ny fanampiana noho ny fitantanana tsy mandeha amin’ny laoniny ka lasa fanararaotana ny madinika sy fitadiavam-bola sy voninahitra ho an’ny sasany izany.
Tena ilain’ny traboina sy ireo nitondra takaitra ny fanampiana na ara-pitaovana na tohana ara-moraly. Tsy mora ny niaritra ireny fahavoazana ireny, indrindra ho an’ireo ankizy madinika izay mora maratra anaty sy mora mitahiry ireny hirifiry niainany ireny.
Sarotra aza ny fanarenana azy ireny ka tena mila ny tohana manokana avy amin’ny fanjakana tokoa izy ireny hiverenany tsara indray amin’ny tontolo milamina sy lavitry ny nofy ratsin’ny tondra-drano.
Deraina manokana ny fandraisana an-tanana ny fitondram-panjkakana izay nanao ny ainy tsy ho zavatra ary nirotsaka an-tsehatra hatramin’ny filoham-pirenena mihitsy tamin’ny fanavotana ireo traboina ireo ka misahana hatrany amin’ny fizarana ny fanomezana.